FJKM – « Haona fi 2019 »: maro ireo nitily ny fahasalamany | NewsMada
FJKM – « Haona fi 2019 »: maro ireo nitily ny fahasalamany
« Rodorodo Haona fi 2019 », andiany faharoa, karakarain’ny foibe FJKM. Natao teny amin’ny Village Voara Andohatapenaka io fihaonana io, ny 30 oktobra hatramin’ny 2 novambra teo. Hetsika sosialy sahanin’ny fiangonana FJKM, fanomezana sehatra ara-panahy fijoroana vavolombelona, fitoriana Filazantsara, nahitana fifaninanana mahakasika izany fitoriana izany. Nanehoana fifankatiavana sy fiombonana ihany koa.
Nampiavaka ity “Rodorodo Haona fi” ity ny lafiny fahasalamana. Natao tamin’izany ny fitiliana maso, diabeta, homamiadan’ny nono, Sida, maso. Ny andro voalohany hatramin’ny farany, nilaharana hatrany ireo fitiliana ireo, izay marihina fa natao maimaimpoana ho an’ny rehetra, tsy misy an-kanavaka. Nanamarika ny dokotera iray mpanao fitiliana fa ny vehivavy no betsaka manao izany no ho ny lehilahy. Amin’ny ankapobeny amin’ny fitiliana ireo karazana aretina rehetra ireo, 30 % ny lehilahy.
Tao ihany koa ireo tranoheva isan-karazany, nahitana varotra fampisehoana sy trano fisakafoana. Tsy mamparisika ny olona loatra ny nijery ireny varotra fampisehoana ireny fa saika tany amin’ny fitiliana ny fahasalamana naharesy lahatra betsaka ireo mpitsidika.